Daraasad cusub: Dadka dhegaha la’a oo ka aragti wanaagsan kuwa wax maqla – SBC
Daraasad cusub: Dadka dhegaha la’a oo ka aragti wanaagsan kuwa wax maqla
Dadka dhageaha la’a ama dhagoolayaasha ayaa la xaqiijiyey inay ka aragti badan yihiin oo ay si wanaagsan uga aragti fiican yihiin dadka caadiga ah ee wax maqla.
Daraasad cusub oo soo baxdey ayey muujiyeen koox saynisyahano ah in dadka dhego la’aanta ku dhasha ama kuwa wax maqalka lumiya xiliga ugu horeeya ee nolashooda ama inta ay yar yar yihiin ay ka aragti fiican oo ay si xoogan u kororto wax aragooda taasi oo wax badan ka badalan dadka caadiga ah ee wax maqla.
Cilimibaarayaal ka tirsan Jaamacada Sheffield ee magaalada Sheffield ee wadanka Ingiriiska ayaa sheegay in cilmi baaris ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dareemayaasha wax maqalka ee ka maqan dadka dhagoolayaasha ah uu ku jiro xidida ama unugyada wax arag.
Dadka dhagoolayaasha ah sidoo kale waxaa cilmibaaristan lagu ogaadey inay aad uga dareen badan yihiin dadka wax maqla, isla markaana ay meel aad fog wax ka arki karaan, halkaasi oo aysan ka arki karin dadka wax maqla.
Natiijada cilmibaaristan oo lagu soo bandhigey warbixin lagu daabacay wargeyska PLoS ONE, ayaa la sheegay in cilimibaaristan lagu ogaaday ka dib markii baaritaan lagu sameeyey dad dhegoolayaal ah iyo kuwa wax maqla.
Dr Charlotte Codina oo ka mid ah kooxda daraasadan soo bandhigtey ayaa ka hadley natiijada cilmibaaristooda “Rajadeenu waxay tahay inaynu fahamnay in dadka dhegaha la’a ama aan wax maqal sare loo qaadi karo xanaanada aragooda”.